Casharada Muhiimka ah ee Laga Barto Jacaylka
HomeArimaha QoyskaCasharada Muhiimka ah ee Laga Barto Jacaylka
Jacaylka ayaa ah dareenka ugu fiican ee uu helo qofku inkasta oo uu leeyahay faa,iidooyin uu qofka siiyo hadana waxa laga bartaa casharo sabab u noqoto in uu qofk qaan-gaadho dhanka fikir ahaanta iyada oo qofka ka barta casharo oo muhiim ah.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa casharada uu jacaylku baro qofka:
1.Casharada uu jacaylku baro dadka ayaa ah in uu qofku kala saaro wixii tagay iyo waxa haatan jooga wax walba oo ay yihiin iyo waliba rajo mar walba ah iyo in uu waxa soo socda fiican yahay.
2.Qofka ayaa ogaan doona in Nolosha ay ka buuxdo lama filaano iyo waliba siro badan isaga oo filan doona in ay dhacaan waxyaabo aan la filayn isaga oo aan sidoo kale fili doonin in ay dhacaan waxyaabaha uu doonayo ama uu ka fikirayo.
3.Qofka ayaa ogaan doona in ayna Noloshu ku joogsan dhinac kaliya laakiin ay sii socon doonto duruuf walba oo jirta iyo waliba in uu ogaado in uu qofku yahay midka kaliya ee awood u leh in uu xaliyo duruuftiisa.
4.Casharadu uu jacaylku baro dadka ayaa ah in uu qofku raadiyo qof awood u leh in uu noloshiisa farxad ku soo kordhiyo.
5.In uu muhiimad siiyo waxyaabaha uu haatan haysto iyo waliba in uuna ka fikirin waxyaabo ka maqan.
Waa Maxay Sababta Ay Dhalinyartu Uga Cabsadaan Guurka?